နီယူးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကော်ပိုရေးရှင်း & ဘဏ်လုပ်ငန်းအကျိုးကျေးဇူးများ
ကော်ပိုရိတ်မှတ်ပုံတင် corporate စာရွက်စာတမ်းများနေသမျှကာလပတ်လုံးအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ချက်ကိုလည်းထောက်ပံ့အတိုင်း, မည်သည့်ဘာသာစကားတွင်ပြီးစီးနိုင်ပါတယ်။
ပိုင်ရှင်များနှင့်ဒါရိုက်တာများနှင့် ပတ်သက်. ပြန်ကြားရေးအရှင်နီယူးတစ်ကော်ပိုရေးရှင်းဖွဲ့စည်းသည့်အခါလျှို့ဝှက်လည်းမရှိဆိုလိုတာကလူထုမှဖန်ဆင်းသည်မဟုတ်။ ထို့ကြောင့်, နီယူးအတွက်ကော်ပိုရေးရှင်းများအတွက်သီးသန့်တည်ရှိမှုယေဘုယျအားထောကျခံခဲ့သည်။
နီယူးအတွက်ကမ်းလွန်ကော်ပိုရေးရှင်းအနေနဲ့နှစ်စဉ်အခွန်ပြန်လာ file မှမလိုအပ်ပါ။ သူတို့ကအစိုးရကချမှတ်ထားဆိုပြစ်ဒဏ်များကိုရှောင်ကြဉ်ရန်နှစ်စဉ်လိုင်စင်ကြေးပေးဆောင်ဖို့, သို့သော်, လိုအပ်သည်။
နီယူးအတွက်ကမ်းလွန်ကော်ပိုရေးရှင်းများအတွက်နှစ်စဉ်မှတ်ပုံတင်ကြေးအလွန်တတ်နိုင်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ပုံမှန်အားဖြင့်နှစ်စဉ်အကြောင်းကို $ 150 ကုန်ကျခဲ့ပါတယ်။
ကနီယူးအတွက်ဆွဲသွင်းပါဝင်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးမြောက်ရန်ကြာအချိန်အတော်လေးအမြန်ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်, မှတ်ပုံတင်တစ်ပါတ်ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်းခုနှစ်တွင်ပြီးစီးနိုင်ပါတယ်။
နီယူးအတွက်အစိုးရပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများမှပွင့်လင်းဖြစ်မှလူသိများနှင့်ကမ်းလွန်အတွက်အလွန်အထောက်အကူယဉ်ကျေးမှုနှင့်လေထုကိုထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည် . ကော်ပိုရေးရှင်း။
နီယူးအတွက်ဥပဒေစနစ်ဘုံပညတ်တရား၏အင်္ဂလိပ် system ပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ အဆိုပါကျွန်းနှစ်ဆယ်အဖွဲ့ဝင်စည်းဝေးပွဲက Self-အုပ်ချုပ်တိုင်းပြည်ခဲသည် ဖြစ်. , ပရိသ၏ဦးခေါင်းကိုပရီးမီးယားလိဂ်ဖြစ်ပါတယ်။ နီယူးကာကွယ်ရေးအဖြစ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရေးရာနယူးဇီလန်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ထို့အပွငျ Niuean နယူးဇီလန်နိုင်ငံသားများထည့်သွင်းစဉ်းစားနေကြသည်။
1984 ခုနှစ်, ကော်ပိုရိတ်ကမ်းလွန်ဥပဒေပြဌာန်း 1994 ၏ IBC အက်ဥပဒေနှင့်အတူနီယူး၏ကမ်းခြေသို့ရောက်ကြ၏။ ဒီအက်ဥပဒေကိုမိတ်ဆက်အာမခံနှင့်ကမ်းလွန်ထုတ်ကုန်များ၏ပြည့်စုံသောအကွာအဝေးကိုဆက်ကပ်ဖို့ကျွန်းကို enable ယုံကြည်မှုဥပဒေပြဌာန်းဘို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။
သေးငယ်တဲ့အခကြေးငွေ၏ငွေပေးချေမှုတွင်, အမည်များကိုရက်သုံးဆယ်ပတ်လုံးအဘို့သိုထားနိုင်ပါတယ်။ အမည်များကိုလည်းတာဝန်ခံအခမဲ့ 72 နာရီ reserved နိုင်ပါသည်။
အဆိုပါ IBC ၏အမည်ကိုကုမ္ပဏီလီမိတက်, ကော်ပိုရေးရှင်းအတွက်အဆုံးသတ်အားဖြင့်ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှု, သို့မဟုတ် Registry ကိုကအတည်ပြုမည်သည့်နိုင်ငံခြားညီမျှရှိကြောင်းညွှန်ပြရပေမည်။ အောက်ပါစကားလုံးများကိုမသုံးနိုင်သည်အာမခံချက်, ဘဏ်, အဆောက်အအုံလူ့အဖွဲ့အစည်း, ကုန်သည်ကြီးများ, Chartered ဘဏ်, သမဝါယမ, Imperial, အာမခံ, စည်ပင်သာယာတော်ဝင်သို့မဟုတ် Trust မှကုမ္ပဏီ, ဒါမှမဟုတ် သိ. ဆိုအနကျအဓိပ်ပါယျ, ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ။
တစ်ဦးကိုရွေးချယ်ခြင်းသည့်အခါလည်း, လက်တင်အက္ခရာကိုအသုံးပြုရပါမည် နာမတျောကို.
ကုမ္ပဏီနှင့်နီယူးအတွက်ထည့်သွင်းကန့်သတ်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေမှတ်ပုံတင်ဒေသခံကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်နဲ့ process ကိုဝန်ဆောင်မှုတောင်းဆိုမှုများအတှကျဒေသခံတစ်ဦးရုံးနှစ်ဦးစလုံးရှိသည်ဖို့လိုအပ်သည်။
နီယူးအတွက်ထည့်သွင်းကုမ္ပဏီနှင့်ကန့်သတ်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေကအနည်းဆုံးတဦးတည်းရှယ်ယာရှင်ရှိရမည်။ ရှယ်ယာရှင်များ၏တစ်ဦးကအစိုးရမှတ်ပုံတင် optional ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဆောင်လုလင်၏ရှယ်ယာလည်းနီယူးအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းရေးအဘို့အခွင့်ပြုခဲ့ရသည်။
ကုမ္ပဏီများကဒေသခံဒါရိုက်တာများကောက်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး, နှင့်ဒါရိုက်တာများကမ္ဘာပေါ်မှာဘယ်နေရာမှာမဆိုနေထိုင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါရိုက်တာတစ်ဦးကအစိုးရမှတ်ပုံတင် optional ကိုဖြစ်ပါတယ်။
ကုမ္ပဏီနှင့်နီယူးအတွက်ထည့်သွင်းကန့်သတ်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်များအတွက်စံအခွင့်အာဏာမြို့တော်အမေရိကန် $ 10,000 အမေရိကန် $ 10,000 ၏ 1 ရှယ်ယာခွဲဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှယ်ယာမြို့တော်မဆိုငွေကြေး, ဒါမှမဟုတ်ငွေကြေးအရောအနှောအတွင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်ပါသည်။ မြို့တော်ထုတ်ပေးနိမ့်ဆုံးအဘယ်သူမျှမတန်းတူတန်ဖိုးကိုသို့မဟုတ်တန်းတူတန်ဖိုးကိုတဦးရှယ်ယာများထဲမှဝေစုဖြစ်ပါတယ်။
ကုမ္ပဏီနှစ်ပတ်လည်မှတ်ပုံတင်ရေးအခကြေးငွေနှင့်နီယူးအတွက်ထည့်သွင်းကန့်သတ်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေအစိုးရကိုအခကြေးငွေနှင့်ဒေသခံကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်အခကြေးငွေပါဝင်သည်။ စျေးနှုန်း / ကုန်ကျစရိတ်ကွဲပြားပေမယ့်အတော်လေးကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပါတယ်။
ရှယ်ယာရှင်များနှင့်ဒါရိုက်တာများနှစ်ဦးစလုံး၏အစိုးရမှတ်ပုံတင် optional ကိုဖြစ်ကြသည်။
နှစ်စဉ်ပြန်ဖြည့်စွက်ကုမ္ပဏီနှင့်ကန့်သတ်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကုမ္ပဏီထဲဆွဲသွင်းပါဝင် status ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့နီယူးအတွက်ထည့်သွင်းဘို့လိုအပ်ပါသည်။ သို့သော်ကုမ္ပဏီများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်အကောင့်တင်ပြရန်မလိုအပ်ပါ။ သို့သော်ကုမ္ပဏီများကဘဏ္ဍာရေးမှတ်တမ်းများနှင့်အရောင်းအခြေရာခံစောင့်ရှောက်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နေကြသည်။
နီယူးအတွက်ထည့်သွင်းကုမ္ပဏီနှင့်ကန့်သတ်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေနှစ်ခုမှငါးရက်အတွင်းသကဲ့သို့အနည်းငယ်သာအတွက်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအပြီးသတ်နိုင်ပါ။ သို့သော်ဖိုင်တွေနဲ့ turnaround တစ်ခါတစ်ရံအမည်ဖြင့်မှတ်ပုံတင်နှင့်မည်သို့ကုမ္ပဏီကမှတ်တမ်းတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးနှစ်ဦးစလုံးပေါ် မူတည်. ကြာနိုင်ပါတယ်။
အများအပြားမှတ်ပုံတင်ဘို့ဤတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ကိုရှေးခယျြအဘယ်ကြောင့်ကုမ္ပဏီအတွက်ဤမျှလောက်များစွာသောအကျိုးကျေးဇူးနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ရရှိနိုင်နီယူးအတွက်ထည့်သွင်းကန့်သတ်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်များနှင့်အတူ, တဦးတည်းတွေ့နိုင်ပါသည်။ နိမ့်အခွန်နှုန်းနှင့်အနိမ့်အခွင့်အာဏာမြို့တော်လိုအပ်ချက်နှင့်အတူ, နီယူး၎င်းတို့၏အမြစ်များတည်ဆောက်ရန်အများအပြားက start-ups အဘို့ပြီးပြည့်စုံနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါအကျိုးရှိစွာမှတ်ပုံတင်များ၏မြန်နှုန်းအဖြစ်ကမ်းလွန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဆီသို့ယဉ်ကျေးမှုဖော်ရွေသဘောထားကိုနီယူးထည့်သွင်းရန်အကြီးအရာအရပျကိုမှန်ကန်စေသည်။